Bitcoin Debit Card Kuenzanisa 2018 - Bitcoin Credit Card
Bitcoin Debit Card Kuenzanisa 2018 Bitcoin Credit Card – Kutenga Bitcoin pamwe Credit Card
Bitcoin Debit Card Kuenzanisa
TOP Bitcoin Debit Card – mumwe Crypto Currency Card Kuenzanisa
Bitcoin ndiye mari Indaneti – uye ane Credit Bitcoin Card, unogona kubhadhara pose pose apo Credit- kana Debit Cards vanogamuchirwa pamwe Crypto Currency kwaunoda. Pamwe Bitcoin Wallet, unogona kutsiva pamusoro 95% mabasa ose zvisingatomboiti Bank kunogonawo kupa kwauri.
With mukuru musiyano kuti une zvachose kudzora mari yako wakatsiga uye hapana mumwe. Ndiro remangwana rezvemari. Nakidzwa rusununguko. Kana muine mibvunzo pamusoro kutenga Bitcoin Card, nechokwadi kuti tione dzedu “How kusarudza” inotungamirira below.
Spectrocoin Bitcoin Card – Zvayakanakira nezvayakaipira
+ All munyika kwaisanganisira
+ Apps dziripo Windows Mobile vanoshandisa zvakare
+ Company kadhi inowanika
– zvinodhura kutumirwa
– Scam mushumo zvichemo
– Chitima mashoko kubva Website
Anonymous Card: Ehe
Plastic Card: Ehe
Virtual Card: Ehe
Card Price: chikweshe $9.00/€ 8,00 / £ 6,00 – Virtual $0.50/€ 0.50 / £ 0.50
mari: USD, EUR, GBP
Foreign mutengapwe Fee: 3%
Monthly Fee: $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
Cryptopay Bitcoin Card – Zvayakanakira nezvayakaipira
+ Three zvikuru dzeEurope (EUR, GBP, USD) vose mvumo
+ Free kutumirwa nyika yose
+ Website zvakanaka yakagadzirwa uye nyore kushandisa
– Chete EU vagari
– Higher mitengo
– Foreign mutengapwe kubhadhara
Card Price: chikweshe 15 € / £ / $ – Virtual 2.50 € / £ / $
mari: EUR, GBP, USD
WageCan Bitcoin Card – Zvayakanakira nezvayakaipira
+ Available nokuti nyika dzakawanda kusanganisira USA
+ Havaoni vane simba rwokugadzira kumashure
+ Available mu USD, EUR, GBP
+ bhonasi chirongwa
– Zvinodhura kadhi kubhadhara
– Information zvakaoma kuwana pamusoro Website
– The kadhi isingadhuri riri kunze unganidza
Anonymous Card: Aihwa
Card Price: From 0.025 BTC
AdvCash Bitcoin Card – Zvayakanakira nezvayakaipira
+ No pamwedzi rechengetedzo kubhadhara
+ NZD sezvo iripo mari
+ Free pamusoro achibva KURUMIDZAI / SEPA anotamisa, sandara zvazvingava nokuti anotamisa
– No Apps iripo
– EU Countries chete vakatsigira
– No mashoko muridzi mamiriro kana execute
– Daily pokugumira kutenga kuti kunyange rukasimbiswa vanoshandisa
Card Price: chikweshe $/€ 4.99 (14.99 pashure 7 mazuva) – Virtual 1 + 0.99 $/€ mari
mari: EUR, GBP, USD, NZD
Foreign mutengapwe Fee: 2.95%
Loading Fee: $/€ 0.99 por mutengapwe
CoinsBank Bitcoin Card – Zvayakanakira nezvayakaipira
+ All-in-imwe crypto Provider chete chikwama, Exchange uye bitcoin debit kadhi
+ Vasingaverengi zvikuru Fiat mari USD, EUR, GBP, kadhi inowanika NZD, CHF, AUD, JPY dzeEurope zvakare uye zvinoita litecoin nhoroondo zvakare
+ Vazhinji kadhi zvichibva pane ongororo pamwero
– Complex uye kwete pachena muridzi uye ezvirevo yakasimba
– Free kutumirwa inowanika chete shoma vanoshandisa
– High mari kushandisa musi Pos uye ATM
Card Price: chikweshe kubva $14.95 – Virtual kubva $2.95
mari: EUR, GBP, USD, NZD, CHF, AUD
Foreign mutengapwe Fee: From 2.5%
Uquid Bitcoin Card – Zvayakanakira nezvayakaipira
+ Available mu USD, EUR, GBP uye 40 siyana altcoins kunze bitcoin
+ Unlimited hwose kutenga uye ATM withdrawals
+ Vazhinji vachizvitakudza mikana
– Murombo Chirungu rinoshandiswa website yavo
– Not dziripo US vagari
– Fresh kambani
mari: USD, EUR, GBP uye 40 siyana altcoins
Xapo Bitcoin Card – Zvayakanakira nezvayakaipira
+ High pamwero kuchengeteka
+ Strong guta mamiriro
+ No pamusoro kumusoro mari
– Unverified mushandisi vane muganhu kuti paIndaneti uye Pos kwema
– Xapo inotsigira Segwit2X
– Vagari US kunze
Virtual Card: Aihwa
Card Price: chikweshe $20 / € 18 / £ 13
Ndechipi chakanakisisa Bitcoin Card kwandiri?
Sei kusarudza zvakanaka Bitcoin Card Provider?
Kune makambani akawanda uye kutanga munoitika pakupa bitcoin debit makadhi mazuva ano sezvo cryptocurrencies vari kuwana kuwedzera kukurumbira.
Pane dzimwe pfungwa kuti Wanna-kuva bitcoin debit cardholder anogona kutsvaka kana kutsvaka zvakanaka Provider. The kadhi rinobatsirwa buritsa zvakawanda mashoko iyi nzvimbo dzavo, saka zvose zvinotora chete kuriverenga kuburikidza nokungwarira. Wana mashoko okuwedzera pamusoro kadhi issuer kambani.
Pfungwa yose shure bitcoin uye veruzhinji blockchain ledger ndiyo kusavimba. Saka bitcoin debit cardholders kazhinji zvikuru kufungira nemakasitoma pane vatengi mune dzimwe maindasitiri. Naizvozvo rinobatsirwa vanofanira vabvume vatengi vavo remangwana kuti anopa Legit, mabasa akavimbika.
Kazhinji rinobatsirwa kupa zvakawanda basa pane kungova kadhi. Munhu wese ane chikwama, asi somuenzaniso Spectrocoin, Cryptopay, CoinsBank, Xapo zvose kumhanya kwavo bitcoin exchanges kugonesa zvakananga bitcoin kutenga kuburikidza Websites dzavo. Zvikasadaro mushandisi kuva nhaka cryptocurrencies asati rokukwidza kuti nhengo bitcoin debit kadhi.
AdvCash bitcoin debit kadhi rine zvitatu makuru Fiat mari akaita USD, EUR uye GBP vanogamuchirwa ne rubatsiro zvose. NZD ndiye anobuda rakajairika mari, vanozvishandisa Russian anogona kurayira AdvCash bitcoin makadhi debit apo nhoroondo dziri denominated mu NZD.
Plastic uye rakapotsa makadhi uri pamusika. Mapurasitiki Makadhi inogona kushandiswa zvese ATM withdrawals uye paIndaneti kutenga, ari rakapotsa Makadhi angashandiswa paIndaneti chete. Here vachiongorora asati nokusaina kukwira kana Mugoveri anozivisa mapurasitiki makadhi kana chete rakapotsa nzira iripo.
Panguva zhinji bitcoin debit kadhi Provider, vanozvishandisa anogona kushandisa mabasa kunyange pasina mumwe munhu nokuzivikanwa ongororo, kunyange nedzimwe limites Zvakarurama. zvatinorambidzwa izvi zvinosanganisira daily, pamwedzi uye hwose pokugumira mari withdrawals kana Pos kutenga. Dai zvisina kudaro ongororo muitiro kunoitwa pasi uchapupu kuzivikanwa ari muchimiro National ID kadhi uye uchapupu dzokugara zvinogona kuva utility bhiri kubva kare 3 Mwedzi dzakawanda dzacho. The nguva inodiwa kuti ongororo kunogona siyana zvakawanda, kubva vaviri maawa kuti kunyange 10 mazuva.
Bitcoin Debit Card, izvo kusarudza?
Nokuda nemirau mitemo nyaya vanoshandisa muUnited States havachafaniri sevhisi, kunze CoinsBank iyo inopa shoma mabasa US vagari.
Kutumirwa mapurasitiki kadhi mitengo inovakwa mune dzimwe mari, saka zvakajairika kutumirwa rinowanzova vakasununguka, ari rinobatsirwa mhosva pamusoro 45-70 USD nokuti Expedited Delivery nezvechisarudzo.
Vazhinji rinobatsirwa vane smartphone Apps iripo nechokwadi vanoshandisa kudzora mari yavo kubva smartphone. Kazhinji iOS uye Androids mafomu anopiwa, asi Windows dzenhare vanoshandisa ingada kunotsvaga mberi, sezvazvakaita kuwanikwa chete Spectrocoin vatengi.
Card Pricing uye mutengapwe Fees
The kwokutanga kadhi nyaya yechikoro vari kubvira 5 USD kuti 20 USD pamwe avhareji 10 USD. Vamwe anopa Virtual makadhi chete, asi kuti chete mutengo 0.5 USD.
Pane mimwe rinobatsirwa kuva basa pamwe kadhi haina penalized asi vazhinji undoraira dzimwe vachibhadharisa pakuchinja kuva vakaneta. Vakaneta vanoshandisa ndivo vasiri transacting kunyange kamwe pamakore maviri chete kadhi.
Clients anogona rokukwidza kadhi waya anotamisa kana SEPA anotamisa kuti mari kumativi 0.5%-1%. Vamwe vanopa rubatsiro zvinoshanda sandara prices, saka vatengi vanofanira kuteerera nhamba uye uwandu mari kubva chikwama nhoroondo kuti debit kadhi. Pane tsanangudzo vapinze uye tutunura pamwe nzira mubhadharo rinobatsirwa akadai Skrill, Neteller kana PayPal. Vamwe Makadhi bitcoin debit, Zvisinei kuti Pricing wakakwirira kupfuura waya anotamisa, zvinogona 1% kuti 5% pa kwema.
The bitcoin debit kadhi rinobatsirwa vari mari kana User is transacting pamwe kadhi. Kunyange zvazvo paIndaneti kutenga kazhinji vakasununguka, asi vamwe may mirairo yechikoro pamusoro zvakare. ATM anogara mhosva Ukuwo. The epamba mari withdrawals ari kumativi 2-3 USD, yemarudzi withdrawals vari 3-4 USD, zvingadarowo kuti sandara zvazvingava rinoshandisirwa parutivi pauwandu hweavo. Kana kuritenga kana kushaya mari yakasiyana kupfuura default mari yezvinotaurwa mhosva rinobatsirwa zvose imwe mari Gengi pakati 3%.
Client Feedback uye User Experience
basa rakanaka rinotanga kumhara peji yakanaka. Zvinofanira kuva pachena chii basa uye zvakadini unoita mutengo. Vatengi vanoshandisa Website kuwana akakodzera mashoko pamusoro mabasa inopiwa. Vasingaverengi zvakajeka Muterere marongerwo uye FAQ; rinobatsirwa zvinofanira kusanganisira kutsvaka functionality mukati maro. Customer kugutsikana zvikuru zvichienderana zvitsigiso yakabva bitcoin debit kadhi issuers, akadai Ticket hurongwa, Hotline Live Chat.
Pane mikana yakawanda ine bitcoin kadhi Provider anogona kupa ayo yeGmail.END_STRONG. The yakanakisisa bitcoin debit kadhi Provider ichitovimbawo zvakananga inodzidzisa zvinodiwa.
Bitcoin Card Kuenzanisa
Designed ne Themient